दक्षिण कोरियाले प्रयोग गरेका कफी कप फिर्ता गरे पैसा दिने ! – Kantipur Press
दक्षिण कोरियाले प्रयोग गरेका कफी कप फिर्ता गरे पैसा दिने !
दक्षिण कोरिया सरकारले व्याक्तीले प्रयोग गरेका व्याक्तिगत उपयोगको फोहोरलाई कम गर्न,जलवायु परिवर्तनको संकटसंग लडन साथै प्राकृतिक स्रोतहरुको पुन: प्रयोग गर्ने उद्देश्यले मानिसहरुले आफुले प्रयोग गरेको कफी कप फिर्ता गर्ने मानिसहरुलाई पुरस्कृत गर्ने एउटा एप सुरुवात गर्ने भएको छ।
कोरियाली वातावरण मन्त्रालयको नयाँ योजना अनुरुप स्मार्टफोनमा भएको गुगल प्ले स्टोर तथा एप स्टोर मार्फत नयाँ एप विकास गरेर देश भरका कफीसप हरुमा त्यहाँका लगानीकर्तालाई प्रयोग गरिएका कफी कपहरु फिर्ता गर्न सकिने अनुमति दिईने भएको छ।
एप मार्फत कफीसप हरुलाई एक कप को ३०० वोनको दरले पैसा फिर्ता गर्ने कोरियाली वातावरण मन्त्रालयले बताएको छ। एप गुगल प्ले स्टोर र एप्पलको एप स्टोरमा उपलब्ध छ।
मन्त्रालयले जुन १० बाट नयाँ वातावरणीय नीतिको रूपमा उक्त सेवा लागु हुनुभन्दा अघि परीक्षण गरिएको थियो। यो नीति गत जुनमा देशको स्रोत पुन: प्रयोग ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणाम हो।
परीक्षण सेवा मे6मा रहेका चार कफी पसलहरु बाट सुरु भएको थियो।साथै परिक्षण सेवा प्रदान गर्न इच्छुक थप स्टोरहरु मा विस्तार हुने जनाईएको छ। परीक्षण सेवा जुन9तारिख सम्म जारी रहनेछ ।
सहभागी स्टोरहरूले पहिले बारकोडसहित कपहरू उपभोक्ता हरुलाई प्रदान गर्छन्। प्रयोग भईसकेको कप फिर्ता गर्न ईच्छुक प्रयोगकर्ताहरूले स्टोरको काउन्टरमा कपको बारकोड स्क्यान गरेर त्यसपछि प्रयोगकर्ताको मोवाईलमा रहेको एपमा देखाइएको अर्को बारकोड स्क्यान गर्न सक्छन्। त्यसपछि एपले जम्मा रकम सिधै उनीहरूको बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्छ। यदि प्रयोगकर्ताहरूले नगदमा पैसा फिर्ता लिन चाहन्छन् भने, तिनीहरूले स्टोरमा रहेका कर्मचारी हरुसंग अनुरोध गर्न सक्छन्।
मन्त्रालयको रिसोर्स सर्कुलेशन ब्यूरो अन्तर्गतको रिसोर्स रिसाइक्लिङ्ग डिभिजनले विकास गरेको एपले प्रयोगकर्ताले कति पैसा सङ्कलन गरेको छ र प्रयोगकर्ताको हालको लोकेशनको आधारमा प्रयोग गरिएका कपहरू फिर्ता गर्ने सबैभन्दा नजिकको स्थान कहाँ छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ।
जितेँ भने नेपालै बस्छु हारे कोरिया छँदैछ भन्दै मेयरमा भिडन कोरियाबाट छुट्टिमा नेपाल !
रहिनन ५५ बर्षिय कोरियन फिल्म स्टार खाङ सो यून !